Home Wararka Dowladda Kenya oo shaacisay rag Kenyaan ah oo ku biiray ururka al...
Dowladda Kenya ayaa shaacisay magacyada saddex ka mid ah Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay hubeysan yihiin qatarna ku yihiin Muwaaddiniinta Kenyaanka ah.
Magacyada raggan ayaa lagu kala sheegay Abdalla Omar Masudi, Ismael John Otieno iyo John Muasya oo ku magac dheer Yahya Muasya.
Raggan ayey dowladda Kenya sheegtay in ay ka soo kala jeedaan Gobollada Mombasa iyo Kwale ee dalka Kenya.
Booliska waxa ay sheegeen in Guriga Cabdalla ay weerareen 12-kii Bishan, kana soo heleen Qori AK47 ah, iyo 30 Xabbo oo rasaas ah.
Ismael iyo Yahya ayey Boolisku sheegeen in markii ugu dambeysay lagu arkay degaanka Bombolulu, ee Magaalada Mombasa, Bishii October ee la soo dhaafay.
Sanadkii 2016-kii ayaa lagu xiray Lamu, waxaana la siidaayay muddo kaddib markii lagu waayay caddeymo ku filan, markaas oo lagu helay in ay u safreen Soomaaliya.
Previous articleXildhibaanada golaha shacabka oo si kulul u dhaliilay fashilka wasiir Beyle
Next articleDowladda Soomaaliya oo soo saartay mar kale qoraal la xiriira dilka suxufi Khaashuqji ee Sacuudiga
MW A. Madoobe oo kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha ciidanka...
Hay’adda xuquuqal insaanka oo war ka soo saartay sida loogu xadgudbay...